လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက ကလေးသတို့သမီးများ - For her Myanmar
အပြစ်ကင်းတဲ့ ဒီမိန်းကလေးငယ်လေးဟာ ဘယ်လိုများ အိမ်ထောင်ရှင်ဘဝနဲ့ ကျင်လည်နိုင်မလဲ?
ဆယ်နှစ်သမီးလေးတစ်ယောက်ကို သူ့အမေက သတို့သမီးဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ပေးပြီး မိတ်ကပ်ခြယ်သပေးနေပါတယ်။ ဘေးနားမှာလည်း ဆွေမျိုးတွေက ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးလို့ပေါ့။ ဒီမြင်ကွင်းကို ရုတ်တရက်မြင်ရရင် ကောင်မလေးက ကျောင်းကပွဲမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်များ ပြင်ဆင်ပေးနေသလားလို့ ထင်မြင်မိမှာပါ။
အမှန်မှာတော့ ဆယ်နှစ်အရွယ်ဒီကောင်မလေးဟာ အိမ်ထောင်ရှင်မဘဝကို ခံယူဖို့အတွက် တကယ့် သတို့သမီးလေးဖြစ်တော့မှာပါ။ ဒီလိုအဖြစ်တွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းလည်း မဟုတ်သလို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အခုထိကြုံတွေ့နေရဆဲပါ။
ကလေးသူငယ်လက်ထပ်မှု (Child Marriage) လို့ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ အသက်မပြည့်ခင် လက်ထပ်မှုဆိုတာ အသက် ဆယ့်ရှစ်နှစ်အောက် ဒါမှမဟုတ် ဆယ်နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ လက်ထပ်ကြတာကို ခေါ်ဆိုပြီး အသက်မပြည့်သူဟာ ယောက်ျားလေးရော၊ မိန်းကလေးပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အီသီယိုပီးယား က ကလေးသူငယ်လက်ထပ်ပွဲတစ်ခု
ဒါပေမဲ့ အသက်မပြည့်ခင် လက်ထပ်မှုကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ရလဒ်တွေကို အဓိကထိခိုက်ခံစားရတာက မိန်းကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ရလဒ်တွေ ဆိုတာက ပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးတာ၊ အခြားအခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးတာ၊ ကလေးမီးဖွားရင်း အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာ စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အသက်မပြည့်ခင် လက်ထပ်မှုတွေကို အများဆုံးကျင့်သုံးနေကြတဲ့ ဒေသတွေက အာဖရိက တိုက်အတွင်းက နိုင်ငံတွေ၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွေနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေ ဖြစ်ကြပြီး အခြားဒေသတွေမှာလည်း ရှိနေပါတယ်။ အံ့သြစရာက အမေရိကန် နဲ့ ဥရောပလို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ နေရာတွေမှာတောင် ကလေးသူငယ် လက်ထပ်မှုတွေ ရှိနေဆဲပါ။
ကလေးငယ်တွေကို အရွယ်မတိုင်ခင် လက်ထပ်ပေးရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ ပညာနည်းပါးခြင်းတွေ၊ ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုမရှိတာတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကလေးသူငယ် လက်ထပ်မှု ဖြစ်စဉ်ကို ပညာရှင်တွေ လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ စိတ်ဝင်စားစရာ အချက် (၅)ချက်ကို တွေ့လာရပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ …
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် က ကလေးသတို့သမီးငယ်လေး
(၁) နှစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာ ကမ္ဘာ့တစ်နေရာက မိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ သတို့သမီးဖြစ်နေရပါတယ်။
(၂) ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေထဲက ၉၀%ဟာ လက်ထပ်ထားပြီးသား မိန်းကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
(၃) တကယ်လို့သာ ကလေးသူငယ် လက်ထပ်မှုကို လုံးဝတားဆီးရပ်တန့်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးငယ်တွေ ပညာသင်ကြားနိုင်ခွင့်ကို ထက်ဝက်လောက် မြှင့်တင်လာနိုင်မှာပါ။
Related Article >>> အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတွေကို ဘယ်လို ဆက်ဆံကြလဲ?
နီပေါ နိုင်ငံက ကလေးသတို့သမီးငယ်လေး
(၄) ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုက မိန်းကလေးငယ်တွေက အရွယ်မတိုင်မီ လက်ထပ်ရနိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
(၅) ကလေးသူငယ် လက်ထပ်မှုကို ဆယ့်ငါးနှစ်အတွင်းမှာ တားဆီးရပ်တန့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားဖို့ နိုင်ငံတကာက သဘောတူညီထားကြပါတယ်။
တကယ်တော့ အသက်ဆယ့်ရှစ်နှစ်အောက်မှာ လက်ထပ်ခြင်းဟာ ဆိုးရွားတဲ့ ရလဒ်တွေကို ဦးတည်နိုင်စေတာမို့ တားဆီးသင့်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပြီး ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင် မိန်းကလေးငယ်တွေ သတို့သမီးဖြစ်ရခြင်း ဆိုတာကတော့ လုံးဝကို လက်ခံစရာမရှိတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေပါ။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ရာလည်း ရောက်ပါတယ်။
ဒီလို ဆိုးရွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို ကမ္ဘာမြေပေါ်ကနေ အပြီးတိုင်ဖယ်ရှားနိုင်ကြပါစေလို့ မျှော်လင့်ရင်း…
References : girlsnotbrides , weforum
အပွဈကငျးတဲ့ ဒီမိနျးကလေးငယျလေးဟာ ဘယျလိုမြား အိမျထောငျရှငျဘဝနဲ့ ကငျြလညျနိုငျမလဲ?
ဆယျနှဈသမီးလေးတဈယောကျကို သူ့အမကေ သတို့သမီးဝတျစုံ ဝတျဆငျပေးပွီး မိတျကပျခွယျသပေးနပေါတယျ။ ဘေးနားမှာလညျး ဆှမြေိုးတှကေ ပြျောရှငျစှာနဲ့ ကူညီလုပျကိုငျပေးလို့ပေါ့။ ဒီမွငျကှငျးကို ရုတျတရကျမွငျရရငျ ကောငျမလေးက ကြောငျးကပှဲမှာ သရုပျဆောငျဖို့အတှကျမြား ပွငျဆငျပေးနသေလားလို့ ထငျမွငျမိမှာပါ။
အမှနျမှာတော့ ဆယျနှဈအရှယျဒီကောငျမလေးဟာ အိမျထောငျရှငျမဘဝကို ခံယူဖို့အတှကျ တကယျ့ သတို့သမီးလေးဖွဈတော့မှာပါ။ ဒီလိုအဖွဈတှဟော စိတျကူးယဉျဇာတျလမျးလညျး မဟုတျသလို ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာ အခုထိကွုံတှနေ့ရေဆဲပါ။
ကလေးသူငယျလကျထပျမှု (Child Marriage) လို့ ချေါဆိုကွတဲ့ အသကျမပွညျ့ခငျ လကျထပျမှုဆိုတာ အသကျ ဆယျ့ရှဈနှဈအောကျ ဒါမှမဟုတျ ဆယျနှဈအောကျ ကလေးငယျတှေ လကျထပျကွတာကို ချေါဆိုပွီး အသကျမပွညျ့သူဟာ ယောကျြားလေးရော၊ မိနျးကလေးပါဖွဈနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> တရုတျအမြိုးသမီးတှေ လုပျကိုငျခှငျ့မရခဲ့တဲ့ အလုပျအကိုငျမြား
အီသီယိုပီးယား က ကလေးသူငယျလကျထပျပှဲတဈခု
ဒါပမေဲ့ အသကျမပွညျ့ခငျ လကျထပျမှုကွောငျ့ ဖွဈလာတဲ့ ဆိုးရှားတဲ့ ရလဒျတှကေို အဓိကထိခိုကျခံစားရတာက မိနျးကလေးတှဖွေဈပါတယျ။ ဆိုးရှားတဲ့ရလဒျတှေ ဆိုတာက ပညာသငျကွားခှငျ့ဆုံးရှုံးတာ၊ အခွားအခွခေံ လူ့အခှငျ့အရေးတှေ ဆုံးရှုံးတာ၊ ကလေးမီးဖှားရငျး အသကျဆုံးရှုံးနိုငျတာ စတာတှဖွေဈပါတယျ။
ဒီလို အသကျမပွညျ့ခငျ လကျထပျမှုတှကေို အမြားဆုံးကငျြ့သုံးနကွေတဲ့ ဒသေတှကေ အာဖရိက တိုကျအတှငျးက နိုငျငံတှေ၊ အိန်ဒိယ၊ ပါကစ်စတနျ၊ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံတှနေဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံတှေ ဖွဈကွပွီး အခွားဒသေတှမှောလညျး ရှိနပေါတယျ။ အံ့သွစရာက အမရေိကနျ နဲ့ ဥရောပလို ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျနတေဲ့ နရောတှမှောတောငျ ကလေးသူငယျ လကျထပျမှုတှေ ရှိနဆေဲပါ။
ကလေးငယျတှကေို အရှယျမတိုငျခငျ လကျထပျပေးရတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေ ဓလထေုံ့းတမျးစဉျလာတှေ၊ ဆငျးရဲမှဲတမှေုနဲ့ ပညာနညျးပါးခွငျးတှေ၊ ကြား/မ တနျးတူညီမြှမှုမရှိတာတှကွေောငျ့ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
ကလေးသူငယျ လကျထပျမှု ဖွဈစဉျကို ပညာရှငျတှေ လလေ့ာမှုတှေ ပွုလုပျတဲ့အခါ စိတျဝငျစားစရာ အခကျြ (၅)ခကျြကို တှလေ့ာရပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့ …
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ က ကလေးသတို့သမီးငယျလေး
(၁) နှဈစက်ကနျ့တိုငျးမှာ ကမ်ဘာ့တဈနရောက မိနျးကလေးငယျတဈယောကျဟာ သတို့သမီးဖွဈနရေပါတယျ။
(၂) ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံတှရေဲ့ ဆယျကြျောသကျ ကိုယျဝနျဆောငျမှုတှထေဲက ၉၀%ဟာ လကျထပျထားပွီးသား မိနျးကလေးတှဖွေဈပါတယျ။
(၃) တကယျလို့သာ ကလေးသူငယျ လကျထပျမှုကို လုံးဝတားဆီးရပျတနျ့လိုကျနိုငျမယျဆိုရငျ အမြိုးသမီးငယျတှေ ပညာသငျကွားနိုငျခှငျ့ကို ထကျဝကျလောကျ မွှငျ့တငျလာနိုငျမှာပါ။
Related Article >>> အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ အမြိုးသမီးတှကေို ဘယျလို ဆကျဆံကွလဲ?
နီပေါ နိုငျငံက ကလေးသတို့သမီးငယျလေး
(၄) ဆငျးရဲတဲ့ မိသားစုက မိနျးကလေးငယျတှကေ အရှယျမတိုငျမီ လကျထပျရနိုငျခွေ ပိုမြားပါတယျ။
(၅) ကလေးသူငယျ လကျထပျမှုကို ဆယျ့ငါးနှဈအတှငျးမှာ တားဆီးရပျတနျ့နိုငျဖို့ ကွိုးစားဖို့ နိုငျငံတကာက သဘောတူညီထားကွပါတယျ။
တကယျတော့ အသကျဆယျ့ရှဈနှဈအောကျမှာ လကျထပျခွငျးဟာ ဆိုးရှားတဲ့ ရလဒျတှကေို ဦးတညျနိုငျစတောမို့ တားဆီးသငျ့တဲ့ ကိစ်စဖွဈပွီး ဆယျနှဈဝနျးကငျြ မိနျးကလေးငယျတှေ သတို့သမီးဖွဈရခွငျး ဆိုတာကတော့ လုံးဝကို လကျခံစရာမရှိတဲ့ ဖွဈရပျတှပေါ။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျအခှငျ့အရေးကို ခြိုးဖောကျရာလညျး ရောကျပါတယျ။
ဒီလို ဆိုးရှားတဲ့ ဖွဈရပျတှကေို ကမ်ဘာမွပေျေါကနေ အပွီးတိုငျဖယျရှားနိုငျကွပါစလေို့ မြှျောလငျ့ရငျး…
Tags: Bide, Gender Inequality, girl, Knowledge, Tradition, women